Indoor mhepo yepamusoro - Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.
HRV / BSN
Eco-Yakachena Energy Recovery Ventilators
Muchinjikwa Counterflow Heat Exchangers
Michina Heat Exchangers
Sangana Air Handling zviumbu
Rooftop Air Handling zviumbu
Compact Air Handling zviumbu
Industrial Air Handling zviumbu
Yori Coil Air Handling zviumbu
Mumapepa Fresh Air Handling zviumbu
Indoor mhepo yepamusoro
Chii Indoor Air Quality?
"Indoor mhepo quality," kana IAQ, ndiyo nyaya yerudzi rutsva mune kwezvakatipoteredza makachengeteka. Nepo vakawanda hanya akaiswa pamusoro panze kusvibiswa mumakore mashoma adarika, pfungwa iri indoor mhepo kunzwisisa ichangotanga. Kunaka musha wacho mhepo kunyanya ane chokuita chitsama Zvinosvibisa mukati, asi zviri nemaonero mwando kufefetedza mumatunhu. The US Environmental Protection Agency awana kuti kuwanda Zvinosvibisa kunogona kusvika ka100 yakakwirira mumba pane panze. The American Lung Association inofungidzira kuti vanhu vakawanda vanopedza 90% nguva yavo mumba, dzakachena saka mhepo indoor kunokosha chaizvo.
Chii chinokonzera indoor kusvibiswa mhepo?
Maererano US Environmental Protection Agency, zvinhu mukati pamba kuti asunungure gasi vari kukonzera indoor mhepo matambudziko. Zvawanyora zvinosanganisira carpeting, upholstered fanicha, gasi midziyo yemagetsi, pendi uye zvokufembedzwa, mishonga yokuchenesa, mhepo fresheners, yakaoma-vakachenesa zvipfeko uye mishonga yezvipembenene. Kana uine attached garaji, chiutsi kubva peturu, mafuta uye antifreeze mumotokari yako vanogona kuwana nzira yavo mumba wako mhepo. mishonga utsinye kunogona kuuya kubva mudzanga utsi uye woodstoves.
Kushomeka kufefetedza anogona achiipa dambudziko nekuti Zvinosvibisa kuti vakavharirwa mukati. Zvakasimba chisimbiso uye zvakanaka insulated misha chengeta kunze itsva panze mhepo, izvo zvinogona sanganisa ari Zvinosvibisa. High tembiricha uye mwando mumatunhu vanogonawo kuwedzera kuwanda zvimwe Zvinosvibisa.
Ndechipi chakanakisisa indoor mhepo yepamusoro chigadzirwa?
michina zhinji iripo nhasi chete kurwisa mumwe kana vaviri makirasi mhepo utachiona. Holtop kutsva mhepo yokunatswa gadziriro BSN akagadzirirwa kurwisa zvose zvitatu nzwisisika mhepo acheneswe. Inogona usadzosera chete yakachena mhepo chitsva indoor, dzinoburitsa stale mhepo, asi kuderedza kufefetedza mutengo kana achimhanya mhepo kutonhodza hurongwa.
Ndinoziva sei izvo indoor mhepo yepamusoro chigadzirwa Zvakanaka kwandiri?
Unogona kutaura Holtop okutengesa chikwata kuwana zvakanakisisa zvigadzirwa iwe nemhuri yako. Results dzinobva nyaya kuziva sezvo matambudziko mumba mako. Unogonawo kutaura yomunharaunda HOLTOP munyengeri yako kuongorora musha wako uye indoor nyaradzo gadziriro.
Chii chandingaita pachangu kunatsiridza mhepo unhu musha wangu?
Kune akawanda matanho ose aungatora kuti kuderedza Zvinosvibisa achiparadzira mumba yako mhepo, kusanganisira:
Store yekugezeza zvinhu mudzimba, pendi zvokufembedzwa uye makemikari zvigadzirwa mu zvakasimba chisimbiso mumagaba. Kana zvichiita, nokuzvichengeta panze.
Zvakachena uye Vacuum kanenge kamwe pavhiki.
Gara kushamba mubhedha linens uye stuffed matoyi.
Chengeta mahwindo akavhara kana mukume, kusvibiswa uye mwando mumatunhu zviri kumusoro.
Kumbira vemunzvimbo HOLTOP munyengeri wako rokuongorora uye kuchenesa musha wako kudziyisa uye kutonhora gadziriro.
Iva nechokwadi musha wako zvakanaka ventilated. (Misha Modern vari zvakanaka insulated uye rakanamwa kuti kuchengetedza simba, izvo zvinoreva kuenda neherikoputa Zvinosvibisa havana nzira yokupukunyuka).
Ramba mwando yomuropa mukati ane utano, vakasununguka siyana kudzivirira kukura chakuvhuvhu nokuora (30% - 60%).
Dzivisa kushandisa zvemiti inonhuhwirira deodorizers uye kunhuhwirira-masking mhepo fresheners, izvo zvingakonzera chepfu.
Sarudza nemidziyo kuti emit zviduku zvinokwanisika uwandu kwemakemikari vapor.
Usarega kusvuta mukati musha wako uye nechokwadi zvose gasi midziyo yemagetsi zvakakodzera pedzera.
Uyai Forest-Fresh Air Kuti Upenyu Hwako!
Umbwa muna 2002, Holtop ndiye aitungamirira mugadziri mu China kushandisa kugadzirwa mhepo kuti mhepo kupisa apore michina.
Adress: Kwete 5 Yard, 7th Guanggu Street, Badaling Economic Development Zone, Yanqing District, Beijing, China
Endesai Inquiry FOR NYANZVI & mari yakawanda HVAC Solutions